Akụkọ - Eziokwu Banyere Prọdegradable Plastic
1. Kedu ihe bụ plastik na-emebi emebi?
Plastọ degradable bụ nnukwu echiche. Ọ bụ oge ma nwee otu ma ọ bụ karịa usoro n'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi akọwapụtara, na-ebute mgbanwe dị ukwuu na usoro kemịkal nke ihe ahụ, na-efunahụ ụfọdụ njirimara (dị ka iguzosi ike n'ezi ihe, ngwugwu molekụl, usoro ma ọ bụ ike igwe) na / ma ọ bụ agbaji plastic.
2. Gịnị bụ plastic ere ere?
Plastic plasta a na-emebi emebi bụ plastik nke ihe ndị dị ndụ, ma ọ bụ microbes, na mmiri, carbon dioxide, na biomass nwere ike ire. A na-ejikarị ihe ndị nwere ike imegharị ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe dị na plastik, micro-organism, petrochemicals, ma ọ bụ njikọta nke atọ.
3. Kedu ihe nwere ike ibibi ihe?
Ihe eji emebi ihe bu ihe eji eme ka ihe ndi ozo di ka cellulose, stachi, akwukwo, wdg, tinyere plastik biodegradable nwetara site na bio-synthesis ma obu ihe ndi ozo.
Plastic biodegradable na-ezo aka nnu inorganic mineral na biomass ọhụrụ (dị ka ahụ nwụrụ anwụ microbial, wdg) nke mmebi ya na-abụkarị ihe omume nke microorganisms na okike n'okpuru ọnọdụ okike dịka ala na / ma ọ bụ ájá, na / ma ọ bụ ọnọdụ akọwapụtara dịka ọnọdụ compost ma ọ bụ anaerobic diges ma ọ bụ na mmiri mmiri ọdịbendị mmiri, nke ga-emesịa gbadaa kpamkpam na carbon dioxide (CO2) ma ọ bụ / na methane (CH4), mmiri (H2O) na nke ihe ndị dị na ya.
Okwesiri ighota na ihe obula nke ihe ndi ozo, tinyere akwukwo, choro onodu gburugburu ebe obibi maka nbibi ya. Ọ bụrụ na ọ nweghị ọnọdụ mbibi, ọkachasị ọnọdụ ibi ndụ nke microorganisms, mbibi ya ga-adị nwayọ nwayọ; N'otu oge ahụ, ọ bụghị ụdị ihe ọ bụla nwere ike ibibi ngwa ngwa nwere ike iwelata ngwa ngwa n'okpuru ọnọdụ gburugburu ebe obibi ọ bụla. Ya mere, a na-atụ aro ka anyị chọpụta ma enwere ihe eji emebi ihe site na ịmụ ọnọdụ gburugburu ya na ịtụle nhazi nke ihe ahụ n’onwe ya.
4. pladị plastik ndị nwere ike ire ere
Dabere n'ụdị akụrụngwa eji eme ihe, enwere ike kewaa plastic nwere ike kee ụzọ anọ. Categorydị nke mbụ bụ plastik na-edozi ya ozugbo site na ihe ndị sitere n'okike. Na ahịa ugbu a, biodegradable plastic, nke a na-emepụta site eke polymers tumadi gụnyere thermoplastic stachi, biocellulose na polysaccharides wdg.; Akụkụ nke abụọ bụ polymer nke enwetara site na microbial gbaa ụka na chemical njikọ, dị ka polylactic acid (PLA), wdg; Thirddị nke atọ bụ polymer, nke ihe microorganism na-arụ ọrụ, dị ka polyhydroxyalkanoate (PHA), wdg; Akụkụ nke anọ bụ plastik na-emebi emebi nke enwetara site na ịgwakọta ihe ndị a kpọtụrụ aha na mbụ ma ọ bụ site na ịgbakwunye ọgwụ ndị ọzọ.